သာကေတတွင် အစ္စလာမ့်ဝတ်ပြုဆောင်များပိတ်ပင်ခံထားရသဖြင့် လမ်းပေါ်ထွက်ဝတ်ပြု | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeသာကေတတွင် အစ္စလာမ့်ဝတ်ပြုဆောင်များပိတ်ပင်ခံထားရသဖြင့် လမ်းပေါ်ထွက်ဝတ်ပြု
သာကေတတွင် အစ္စလာမ့်ဝတ်ပြုဆောင်များပိတ်ပင်ခံထားရသဖြင့် လမ်းပေါ်ထွက်ဝတ်ပြု
June 1, 2017 drkokogyi
Myanmar Muslim Media added4new photos.
ဟိန်းအောင် Myanmar Muslim Media မေ ၃၁၊ ၂၀၁၇
သာကေတမြို့နယ်အတွင်း အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဝတ်ပြုရာနေရာများကို ဒေသအာဏာပိုင်များက ပိတ်သိမ်းထားသဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက လမ်းပေါ်တွင် စုပေါင်းဝတ်ပြုမှုတစ်ရပ်ကို ယနေ့စတင်ပြုလုပ်လုိုက်သည်။
“ကျွန်တော့်အသက် ၃၂ ရှိပြီ ကျွန်တော်တုို့လူမှန်းသိတတ်စအရွယ်ကတည်းက သာကေတမှာရှိတဲ့ကျောင်း ၈ ကျောင်းလုံးမှာ တရားဝင်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။၀တ်ပြုဆောင်တွေ စာသင်ကျောင်းတွေကနေ ဘယ်တုန်းကမှ ပြဿနာမဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ကျွန်တော်တုို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပိတ်ပင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တုို့ လမ်းပေါ်မှာထွက်ဝတ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်”ဟု ကိုမင်းနောင်က Myanmar Muslim Media သို့ပြောသည်။
အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ သြဇာခံများက “တရားမ၀င်ဗလီ”(ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းအတွင်း ၀တ်ပြုမှု)ဟုဆုိုကာ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် သာကေတမြို့နယ်အတွင်း အစ္စလာမ့်ဘာသာရေးဝတ်ပြုဆောင် ၈ ခု တွင် ၀တ်ပြုခွင့်ကို ဒေသအာဏာပိုင်များက ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့မှစတင်ကာပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တုို့ရဲ့ မိတ်ဆွေ အသိုင်းအ၀ို်င်းကြားထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုက ကျွန်တော်တုို့ ၀တ်ပြုတာကို ကန့်ကွက်ထားတာမရှိဘူး။မရှိတဲ့ကြားထဲက နုိုင်ငံတော်အဆင့်လူကြီးမင်းတွေက ဘာ့ကြောင့်ဒီအဖျက်အမှောင့်လုပ်တဲ့ လူတစ်စု ရဲ့ တွန်းအားပေးမှုကြောင့် ကျွန်တော်တုို့ဝတ်ပြုတာကို ကန့်သတ်တာလဲ ချုပ်ချယ်တာလဲဆိုတာ နိုင်ငံတော်အဆင့်လူကြီးမင်းတွေ ကျွန်တော်တုို့ကို တရားဝင်ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်”ဟု ကိုမင်းနောင်ကပင်ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်း ၉ ခုရှိပြီး ၂၀၁၂ တွင် မဒရဆာတစ်ခုကို ဘာသာရေးအစွန်းရောက်လူအုပ်စုတစ်စုကအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ယင်းကျောင်းမှာယနေ့ထက်တုိုင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်မရသေးပေ။
ဓာတ်ပုံ၊ အောင်ဟိန်းသစ်(Myanmar Muslim Media)
Women-led Kachin Groups (Burmese Version). →